Feedh-yahan Indho La’aan ku ciyaarayay Ilaa Wareegii Afraad Oo Uu Tababarihiisu Soo Faro Galliyey CIyaarta
Ciyaaryahanka feedhka Miisaanka Dhexe ee Enzo Maccarinelli ayaa ciyaarta sii watay ilaa wareegii Afraad, iyadoo mid ka mid ah indhihiisa uu ku yaalo dhaawac hallis ahi, kulan ka tirsan Horyaalka Miisaanka dhexe ee Feedhka Aduunka oo uu la ciyaarayay feedh-yahanka Germalka ah ee Juergen Braehmer.
Feedh-yahankan ka soo jeeda gobolka Wales ee wadanka Britain Ayaan si fiican wax u arkaynin tan iyo wareegii koowaad ee kulanka oo uu Isha Midig ka qabsaday feedh xoogani, laakiin wuxuu sii watay ciyaarta ilaa dhamaadkii wareegii 4 aad ee loo gudbayay wareega shanaad , markaas oo uu tababarihiisa oo lagu magacaabo Gary Lockett uu garsoorihii ku qasbay inuu joojiyo kulanka.
Markii la garaacay jalaskii soo kicida wareega 5 aad, ayuu tababare Gary Lockett ku yidhi garsoorihii, “’Uma ogolaan karo inuu sii wato, isagoo wajigiisu sidan u eg yahay.’.
Maccarinelli oo 33 jir ah ayaa doonayay inuu sameeyo isku daygii uu ku guuldaraystay 6 sanno ka hor kadib markii uu la kulmay guuldarooyin is xiga , si kastabase ha ahaatee, halyeygan reer Swansea , wuxuu markale murkacday bilowgii wareegii koowaad ee ciyaartan uu wajahay Braehmer, oo feedh miisaan leh oo uu tuurey ka qabad siiyey wajiga dhinaca midig , kaas oo aragtidii ka lumiyey Maccarinelli.
Juergen Braehmer markii ciyaarta la joojiyey ee lagu dhawaaqay in guushii kulanku raacday , wuxuu isla markiiba bilaabay dabaal degay ku guulaysiga Horyaalnimada feedhka miisaanka dhexe ( WBA light heavyweight title).
Rasmi: UEFA Oo Ku Dhawaaqday Kooxdii Ugu Fiicneyd Kulamaddii Lugta 1-aad Ee Semi Finalka Champions League
Mourinho: “Chelsea Waxay U Baahan Tahay Dhiig Cusub”
Barbara Berlusconi Oo Taageero U Muujisay Tababaraha Liic Liicaya Ee Inzaghi
Victor Valdes Oo Xaqiijiyay Inuu Ka Tagey Kooxda Manchester United
Scolari: Kubadda Cagtu Diin Ayay U Tahay Brazil